मनोरंजन Archives - Online Tamang
﻿ काठमाडौँः साढे ३३ किलो सुुन तस्करी प्रकरणमा राजधानीको न्यूरोडस्थित आरके ज्वेलर्समा गृहमन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिले छापा मारेर सुुनका गरगहनालाई लगेको छ। गृहमन्त्रालयको छानबिन समितिले आरके ज्वेलर्समा छापा मारेपछि बरामद गरिएका गहना सिलबन्दी गरेर लगेको हो । न्यूरोड र दरबारमार्गस्थित आरके ज्वेलर्समा छानबिन समितिका संयोजक सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको टोलीले सोमबार दिउँसो दुुवै पसलमा छापा मारेर सुुन तथा हिराकासहित गरगहना जफत गरेको हो । Traveling gives us the opportunity to disconnect from our regular life. You get to forget your problems/issues forafew weeks, it can also help you figure things out that you would not have understood without the distance traveling can give you. We all have crazy schedules, work andafamily to take care of, going away alone or with some frien
दुनियामा एकसे एक सुन्दरीहरु देखिन्छ। तर कुनै यस्तो सुन्दरी हुन्छन जसलाई दुनिया हेर्न चाहन्छ। आज हामी यस्तो चिजसंग मिलाउदैछौ। जसको हट फिगर र शरीर देखेर जो कोहिले पनि आखा अन्त हट्ने छैन । आज हामी यस्ती सोशलमीडिया सेलेब्रिटीलाई देखाउदैछौ जसलाई देखेर किम कार्दशियनलाई पनि भुल्नु हुनेछ। यी हुन् जेलिनी ओजेडा ओचोआ कुनै सेलिब्रेटी भन्दा कम छैनन्। उनले आफ्नो फिगरलाई मेन्टटेन्ट गरेर लाखौलाई आफ्नो दिवाना बनाउन सफल भएकी छिन । जेलिना अमेरिकाको एरिजोनामा बस्छन । जेलिनाको इंस्टाग्राममा ५० लाख भन्दा बढी फॉलोअर्स छन् । इंस्टाग्राममा जेलिनाले दिनमा एक हट फिगरको फोटो शेयर गर्ने गर्छिन।उनको फ्यानहरु जेलिनालाई किम भनेर बोलाउछन्। कुनै मानिसहरु त उनलाई किमको भन्दा नि राम्रो फिगर भएको बताउछन् । जेलिनालाई ठुल्ठुला कम्पनिहरुले मोडलिङको लागि अफर समेत गरिसकेको छ। समाजिक संजालमा उनको तस्बिरहरु भाइरल भैसकेको
रिलमा संस्कारी बुहारी तर रियलमा निर्लज्ज र अर्धनग्न भए यी सिरियलका यी अभिनेत्री, फोटो देखेर भडकाठमाडौँ। टेलिभिजन क्षेत्रमा अहिले यस्ता धेरै प्रसिद्ध अभिनेत्रीहरु छन् जसका व्यक्तिगत जीवन उनीहरुका व्यवसायिक जीवन भन्दा बिल्कुलै अलग रहेको छ। स्क्रिनमा सोझी-सिधा केटीको भूमिका निभाए पनि वास्तविक जीवनमा उनीहरु आफ्नो बोल्ड र हट पर्सनालिटीको लागि चिनिन्छन। अभिनेत्रीहरु अक्सर आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा हट तस्बिर शेयर गरिरहन्छन। तर यस्तो अवस्थामा प्रशंसकले उनका उक्त अवतार पचाउन सक्दैनन् र ट्रोल शिकार बन्छन। • जेनिफर विंगेटकाठमाडौँ। टेलिभिजन क्षेत्रमा अहिले यस्ता धेरै प्रसिद्ध अभिनेत्रीहरु छन् जसका व्यक्तिगत जीवन उनीहरुका व्यवसायिक जीवन भन्दा बिल्कुलै अलग रहेको छ। स्क्रिनमा सोझी-सिधा केटीको भूमिका निभाए पनि वास्तविक जीवनमा उनीहरु आफ्नो बोल्ड र हट पर्सनालिटीको लागि चिनिन्छन। अभिनेत्रीहरु अक्सर आफ्नो साम
विविध हर्कतका कारण चर्चामा आइरहने गायिका ज्योति मगरलाई आठ अभियोग लागेपछि ज्योतिले गरिन यसरि प्रतिकारसयौं गीतमा स्वर दिइसकेकी ज्योति मगर आफ्ना गीत, स्टेज प्रस्तुति र विविध हर्कतका कारण चर्चामा छाइरहन्छिन्, विवादमा आइरहन्छिन् । दोहोरीलाई फोहोरी बनाएको आरोप खेप्दै आएकी उनलाई संगीत क्षेत्रमा सुनिने कुराहरुका आधारमा शुक्रवारकर्मी अनिल यादवले आठ अभियोग लगाएका छन् । १ तपाईं स्वरमा नजमेपछि शरीर प्रदर्शन गरेर टिकेको कलाकार हो । जुन बेला ज्योति मगरका बारेमा आलोचना हुन थाले, ज्योति मगरका स्कर्टका कुरा हुन थाले त्यतिबेला मेरा २–३ वटा गीत बजारमा हिट भइसकेका थिए । ‘उही मुलाको सिन्की’, ‘जिम्माल बाउकी छोरी’, ‘मलाई उत्ताउली नभन’ गीत हिट थिए । युट्युबमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी भ्युअर्स कमाएको नेपाली लोकदोहोरी गीत सायद मेरो ‘उही मुलाको सिन्की’ नै हो । ‘उही मुलाको सिन्की’ रामचन्द्र काफ्लेसँग गाएको हुनाल
शाहरुख खानकी छोरी सुहाना खान १८ बर्षमै यस्तो हट देखिन्छिन ! हेर्नुहोस कुनै बलिउड हिरोइन भन्दा कम छैनन् !काठमाडौं। बलिउडमा किंगखान नामले चिनिने शाहरुख खानकी छोरी सुहाना खानको जन्मदिन परेको छ । सन् २००० मे २२ तारिखमा जन्मिएकी सुहाना १८ वर्ष पुगेकी छिन् । हुन् । गौरी खान यानिकी सुहानाकी आमाले आफ्नो इन्स्टाग्राममा सुहानाको ग्ल्यामरस फोटो सेयरगर्दै लेखेकी छिन् ‘Gearing up forabirthday bash… Thanks @karanjohar’ यसको मतलब गौरी खान र शाहरुख खानले छोरीको १८ औं जन्मदिन मनाउने तयारी गरिरहेका छन् भन्न सकिन्छ। सानैबाट अभिनयमा रुची राख्ने सुहाना अब चाँडै नै बलिउडमा प्रवेश गर्दैछिन् । केही समय अघि गौरी खानले यो कुरा एक कार्यक्रममा बताएकी थिइन् । मिमेस खानलाई एक अवार्ड कार्यक्रममा छोरी सुहानाबारे प्रश्न सोध्दा उनले भनेकी थिइन्, ‘सुहाना आजकाल एक म्यागजिनको फोटोसुटको तयारीमा बिजी छिन् ।’तर उनले म
बम हमलाको हल्लापछि किन बढ्यो पोर्न फिल्मको व्यापार ?
अमेरिकामा हालै फैलिएको एक हल्लापछि अचानक पोर्न साइटहरुमा पोर्न सामाग्रीहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । पोर्न साइटहरुको ट्राफिक यति बढ्यो की यसअघिका सबै पूराना रेकर्डहरु तोडिए । वास्तवमा हालै अमेरिकाको हवाई प्रान्तमा मिसाइल आक्रमण हुन लागेको गलत हल्ला आगोझैँ फैलियो । अचानक जारी भएको अलर्टपछि मानिसहरुमा तहल्का मच्चियो । तर पछि थाहा भयो की अमेरिकी सुरक्षा एजेन्सीका एक अधिकारीले गल्तीले अलर्ट बटन थिचेपछि मानिसहरुको मोबाइलमा यस्तो सूचना पुगेको रहेछ । मानिसहरु त्रतिस भएपनि मिसाइल आक्रमण त भएन तर उक्त हल्लापछि जे नतिजा आयो तयो भने सबैलाई अचम्ममा पार्ने खालको थियो । समाचार अनुसार मिसाइल हमलाको हल्ला अफवाह भएको सावित भएसँगै अमेरिकामा पोर्न साइट हेर्नेहरुको संख्या तिव्र रुपमा बढेको पाइयो । पोर्न साइटहरुमा भिजिटर्सको ट्राफिक एकाएक बढ्यो । अफवाहको केही मिनेटपछि नै पोर्न साइटहरुमा ट्राफिक ५० प्
सिसाको पुलमा हिन्दा हिन्दै पुल चर्केपछि हेर्नुस यो भिडियो जुन देखेर तपाई आफ्नो हासो रोक्न सक्नु हुन्न पुरा हेर्नुस
सिसाको पुलमा हिन्दा हिन्दै पुल चर्केपछि हेर्नुस यो भिडियो जुन देखेर तपाई आफ्नो हासो रोक्न सक्नु हुन्न पुरा हेर्नुस आमाशयका भित्तामा भएको इन्फ्लायिसन (सुन्निएर रातो तातो भएर दुख्ने समस्या) भने आमाशयका भित्ताको श्लेष्म झिल्ली च्यातिएर घाउ भएको अवस्थालाई भने ग्यास्ट्रिक अल्सर भनिन्छ। ग्यास्ट्रिकको प्रारम्भिक अवस्था हो भने अल्सर त्यसैको विकराल रूप हो। ग्यास्ट्राइटिसलाई तीव्र तथा दीर्घ /जीर्ण गरेर दुई समूहमा बाँडिएको छ। तीव्र ग्यास्ट्राइटिस पेटका भित्ताहरूमा भएका कोषहरूका लागी हानी गर्ने पदार्थहरूको सेवनले गर्दा हुन्छ। यी पदार्थहरूमा, दुखाइ कम गर्ने औषधी (एस्पि्रन, बु्रफेन, निम्स, नेप्प्रोक्सिन) जस्ता औषधी, विषसेवन, मसला, खुर्सानी र नुन ज्यादा हालेको खानेकुरा, जाँड-रक्सी, कोकिनजस्ता मादकपदार्थ पर्दछ। आमाशयमा एच. पाइलोरिक लगायत अन्य ब्याक्ट्रेरिया, भाइरस, कृमि वा फंगसको संक्रमणले पनि हुने गर
चितवन । वर्ष २०१८ को इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा दिल्ली डेयरडेभिल्सबाट खेल्नका लागि बोलकबोलबाट छानिएका नेपाली उदयीमान क्रिकेटर सन्दीपका बाबु आमाले उनको कडा मिहिनेत नै सफलता भएको छन् । उनको रत्ननगरको सौराहा नजिक रहेको बाघमारा टारमा पुगेर कुराकानी गर्दा चन्द्रनारायण ती दिन सम्झिदै भन्छन्, “उसले देखेका सपना र चाहना पूरा भएको छ, यसले हाम्रो खुसीको सीमा छैन ।” सन्दीपको चर्चा यसपालिको बोलकबोल (अक्सन) मा परेदेखि नै हुन थालेको थियो । दिल्लीले किनेपछि झनै बढेर गयो । यसकै कारण उनका परिवार मात्रै होइन, सारा नेपालीले उनको प्रशंसा गर्दै गौरव महसुस गरिरहेका छन् । पढाइभन्दा बढी लगाव उनले क्रिकेटमा दिन्थे पहिलेदेखि नै । तर, पढाइमा पनि बाबुआमालाई जनाएको प्रतिबद्धता भन्दै बढी नै अंक सन्दीपले ल्याउँथे । “सानो उमेर भएकाले पढाइलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर केही हस्तक्षेप गथ्र्यौं”, बाबु चन्द्रनारा
बिहे भाको तीन महिना भो ऐले सम्म गरेको छैन
बिहे भाको तीन महिना भो ऐले सम्म गरेको छैन कुमार बोल्यो ‘ओए साथिहो तिमरुले दुलही ल्याएकै दिन चिक्छौ कि दोस्रो दिन तेस्रो दिन या कसरी बजाउछौ ह’ ? अनि दारुको तालमा सुक चिच्यायो ।ह्या चिक्नै भनेर बिहे गरेर ल्याएछी त मिल्यो भने बाटैमा नत्र घर ल्याएर भित्र हुलेछी दन्काउन थाल्नी हो नि यार । कस्ता मुजिहरु हो तिमेरु थोडी पुजा गर्न ल्याउने हो र सबैको हासो गुन्जिवो कुमार बोल्यो ल सुक तैले ल्याएकै दिन चिक्ने भैस होइन । हो हो कसम ल म ल्याएकै दिन दन्काउछु . सुक ले कसम खाएछी अब सुक चिच्याउ थाल्यो भन्नत कुमार तैले के गर्छस? त कि जिन्दगी नचिकेर बस्छस ह ?हा हा मलाई त लाज लाग्छ यार कसम यार कुमार लजाएर बोल्यो फेरि सबै हासे हाहाहा सुक चिच्यायो फेरि तलाइ लाज लागे बिहे गरेर मेरो मा ल्याइज न त म दन्काउला हा हा सुक ले यस्तो बोलेछी कुमार रन्कियो कस्तो मुजि यार त अर्काको बुढी चिक्छु भन्छस ।भ